Umbuzo: Afudumale Kangakanani Amanzi Ezinhlanzi Ze-Betta - Ibhayisikili Hike
Ikhaya » Okuxubile » Umbuzo: Kudingeka Afudumale Kangakanani Amanzi E-Betta Fish
Kubanda kangakanani kufishi ye-betta?
Ngingakwazi ukwengeza amanzi afudumele ethangini lami le-betta fish?
Ingabe ama-degree angu-70 abanda kakhulu ku-betta?
Ngidinga i-heater yenhlanzi yami ye-betta?
Ngingayigcina kanjani inhlanzi yami ye-betta ifudumele?
Ingabe i-betta yami ingaphila ngaphandle kwe-heater?
Ingabe i-heater iyadingeka ku-aquarium?
Ngingakwazi ukufaka ingubo phezu kwethangi lami lezinhlanzi?
Ngingabona kanjani uma i-betta yami icindezelekile?
Kungani i-betta yami inyakaza?
Ingabe ama-Betta ayakuthanda ukukhanya?
Ngingayigcina kanjani isitsha sami se-betta sifudumele ngaphandle kwehitha?
Ingabe kufanele ngivale isibani sami se-betta ebusuku?
Ingabe i-betta fish iba nesizungu?
Ulihlola kanjani izinga lokushisa kwethangi lezinhlanzi ngaphandle kwe-thermometer?
Ibukeka kanjani inhlanzi ye-betta uma ifa?
Ingabe abakwaBetta badinga ithangi elikhulu?
Ingabe i-Bettas idinga isihlungi?
Ngazi kanjani uma ithangi lami lezinhlanzi linomoya-mpilo omningi?
Izinga lokushisa kufanele ligcinwe ku-75-80 degrees Fahrenheit. Amanzi abandayo angayibulala i-betta, njengoba amasosha omzimba e-betta azohamba kancane futhi awenze atholakale kalula ezifweni. Amanzi ashisayo angenza bangakhululeki futhi baguge ngokushesha, njengoba umzimba wabo uzokwanda. Izinga lokushisa kufanele ligcinwe nge-heater.
Ama-Betta anesidingo esiqinile uma kuziwa ezingeni lokushisa elifanelekile. Izinga lokushisa elifanele liphakathi kuka-78-80°F. Kodwa-ke, bangaphila emazingeni okushisa afudumele njengo-85°F namakhaza angu-76°F.
Yebo, thola i-Marina Betta Submersible Aquarium Heater. Ishisa amanzi kuqala ukuze ifike ku-78 - 80 degrees Fahrenheit, futhi ilungele amathangi afinyelela ku-1.5 engamalitha. Kuwusizo kakhulu ukuvalelwa yedwa.
Izinga lokushisa elilungile le-aquarium yezinhlanzi ze-Betta ngu-70-80 degrees Fahrenheit. Ama-Betta angaphila ngaphandle kwalolu hlu, kodwa angabangela izinkinga zempilo ezimbalwa kuwo. Isimo esinjalo singalimaza amasosha omzimba e-Betta.
Njengoba ama-Betta evamise ukuba ngaphansi kwezimo ezishisayo unyaka wonke, kufanele abe ne-heater ukuze awagcine efudumele. Imisele namachibi ahlala kuwo angashintsha izinga lokushisa ngokushesha ngakho ama-Betta ayakwazi ukubekezelela ukubanda kunezinhlanzi eziningi zasezindaweni ezishisayo.
Uwagcina Kanjani Amanzi E-Betta Efudumele Ngaphandle Kwe-heater Sebenzisa I-hood/Canopy. Enye yezindlela ezilula zokuqinisekisa ukuthi amanzi akho e-Betta afudumele futhi ahlala efudumele ukusebenzisa i-hood noma i-canopy yethangi. Sebenzisa Ukukhanya Okuqine Kakhudlwana. Yigcine Endaweni Efudumele. Sebenzisa Isihlungi Esingewona Amandla Kahle.
Yize abantu bengajwayele ukucabanga ngawo ngale ndlela, ama-betta ayizinhlanzi zasezindaweni ezishisayo. Lokho kusho ukuthi bahlala emanzini afudumele endle. Zidinga amazinga okushisa ukusuka maphakathi no-70s, kuze kufike ku-80 degrees. Uma izinga lokushisa legumbi lakho lihlala liphakathi kwama-70s liphansi kakhulu, ungadlula ngaphandle kwehitha.
Uma ugcina izinhlanzi zasezindaweni ezishisayo, uzodinga i-heater. I-heater iqinisekisa ukuthi ithangi alipholi kakhulu, nokuthi izinga lokushisa lihlala lizinzile phakathi nosuku, ngisho nalapho igumbi liphola (isb, ebusuku). Izifudumezi ezingaphansi kwamanzi zihlala ngaphansi kwamanzi ngokuphelele.
Sicela uqaphele ukuthi izingubo zokulala namathawula akufanele kusetshenziswe ngaphezu kwethangi njengesivalo. Kunalokho, zisebenzise eceleni njenge-insulation. Lokhu kuzogcina izinga lokushisa kwamanzi liphezulu ngokwanele izinhlanzi zakho; iqhinga libuye libe usizo ngesikhathi sokunqamuka kukagesi.
Ngakolunye uhlangothi, i-betta ecindezelekile noma egulayo ingase ibonise izimpawu ezilandelayo: Umbala ophelile, othulisiwe. Amaphiko okucijile abanjwe eduze nomzimba. Imigqa yokucindezeleka–igqame kakhulu kuma-betta wesifazane, futhi ngezinga elincane kwabesilisa. Ukungathandi ukudla noma kungase kukushaye indiva ukudla kwezinhlanzi okusanda kunikezwa. I-Lethargy. Ukucasha. I-Darting.
IMPENDULO: Uma i-betta fish yakho iqala ukunyakaza ngokungavamile kungase kubonise ukutheleleka kwangaphandle kwe-parasitic njenge-Ich noma i-Velvet noma kungase kube inkomba yezinkinga zekhwalithi yamanzi njengokuba khona kwe-ammonia noma ukucasuka kwe-chlorine. I-Ich inokubukeka kukasawoti omncane omhlophe njengama-granules anamathele ekhanda le-betta yakho, umzimba nasemaphikweni.
Ingabe i-Betta Fish ithanda ukukhanya? Yebo, ngeke bathande noma yini eqine kakhulu, kodwa ukukhanya okujwayelekile kwe-aquarium kulungile. I-Bettas iphinde ithande izitshalo ze-aquarium, ezidinga ukukhanya kwe-aquarium ukuze zikhule futhi ziphile.
Kunconywa ukukhanya kwe-aquarium ethangini lakho. -Vala lokhu kukhanya ebusuku, unikeze inhlanzi yakho ye-betta isikhathi sokuphumula (njengoba ubungenza endle). -Gcina ukukhanya ubusuku bonke. Lokhu kungagcizelela izinhlanzi.
Ingabe Baba Nesizungu? Izinhlanzi ze-Betta ziyindawo ngokwemvelo futhi akufanele zihlaliswe nanoma iyiphi enye izinhlanzi ze-betta ngoba zizolwa futhi zilimazane, ngokuvamile okuholela ekufeni. Mancane amathuba okuba babe nesizungu ethangini labo; nokho-ke, uma besethangini elincane, bangase badinwe.
Uma ushiya indololwane yakho emanzini noma imizuzwana engu-5-10, uzokwazi ukwakha umqondo onzima wokushisa kwamanzi. Uma amanzi ezwa efudumele kancane, kodwa engashisi, acishe abe ngu-100 °F (38 °C).
Ezinye izimpawu ezinikeza inkomba yokwazi ukuthi i-betta fish isizofa nini zihlanganisa ukushintsha kombala emzimbeni wenhlanzi, njengamachashaza amhlophe noma ansundu. Ukunyakaza okungajwayelekile kokubhukuda noma ukunciphisa/ukudla amaphiko nakho kungakhomba izifo ezinzima.
Ama-Betta adinga i-aquarium enesihlungi esingamagaloni okungenani amathathu. Misa ikhaya labo elisha okungenani usuku olulodwa ngaphambi kokuba bafike. Ubukhulu obuncane be-aquarium buzoncika ekutheni unezinhlanzi ezingaki. Nge-betta nje, ithangi kufanele libe okungenani amalitha angu-3.
Ingabe i-Betta fish idinga isihlungi? Ukungasisebenzisi isihlungi kudinga ukuzibophezela nomsebenzi omningi. Ukusebenzisa isihlungi kungcono kakhulu ku-Betta yakho. Uma ukhetha ukungasisebenzisi isihlungi lapho ugcina i-Betta kuwukuzibophezela okukhulu njengoba uzodinga ukwenza izinguquko ezinkulu kakhulu zamanzi ngesonto ukuze amanzi angabi nobuthi.
Izimpawu zomoya-mpilo omningi ethangini lezinhlanzi amabhamuza aphuma phezulu kanye namazinga komoyampilo ancibilikile akhuphuka. Inhlanzi izophinde ibonise ukuziphatha okungavamile kokubhukuda, ukuphefumula komlomo ovulekile, isifiso sokudla ngokweqile, noma ukukhathala. Uma kuyekwa kungabhekwanga isikhathi eside, kungaba yingozi empilweni yezinhlanzi.
Impendulo Esheshayo: Indlela Yokufudumala Amanzi Ezinhlanzi Ze-Betta
Ingabe Inhlanzi Ye-Betta Ingaba Semanzini Afudumele
Umbuzo: Ingabe I-Betta Fish Ingafa Ngamanzi Afudumele
Kufanele Afudumale Kangakanani Amanzi Ngenhlanzi Ye-Betta
Impendulo Esheshayo: Ngingangeza Amanzi Afudumele Ethangini Le-Betta Fish
Umbuzo: Ngingafaka Inhlanzi Yami Ye-Betta Emanzini Kampompi Afudumele
Ingabe I-Catfish Izinhlanzi Zamanzi Ezifudumele
Umbuzo: Ingabe I-Goldfish Izinhlanzi Zamanzi Ezifudumele
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Betta Fish Ifudumele Noma Igazi Elibandayo
Umbuzo: Ingabe I-Betta Fish Ingasinda Emanzini Afudumele